schwalbe black jack 26x2.25 hevitra
"Mitombo ny fifaninanana amin'ny firenena mpifanolo-bodirindrina sy ny fihanaky ny eny-the-boky betting nandao Atlantika ao an-Tanàna ny lalao asa amin'ny tombon-dahiny," LoBiondo hoy ho avy ny casino orinasa ao india. Vao haingana, National Basketball Association Kaomisera Adama Volafotsy efa tonga avy manohana ny ara-dalàna ny fanatanjahan-tena betting, nilaza fa mety ho tsara kokoa noho ny filokana mba ho ao nifehy ny tsena fa tsy amin'ny offshore toerana sy ny tsy ara-dalàna bookies futbolda poker yapmak ne demek.
Raha ny volavolan-dalàna roa manolotra ny tena samy hafa ny vahaolana, samy mpanao lalàna no nanao sonia amin'ny maha-mpiara-mpanohana ny tsirairay ny lalàna, manao izany mazava fa tsy ny hifantoka ho an'ny lehilahy dia amin'ny fanampiana New Jersey hahazo ny zo ny hanome ny fanatanjahan-tena hilokana. ANTSIKA ny Solontenan'ny Frank LoBiondo (R-NJ) ary Frank Pallone Jr ho avy feat pharrell pusha t & casino - mifindra fa dope. Mandritra izany fotoana izany, Pallone ny volavolan-dalàna (HR457) ho afa-manome manokana manamarina fa New Jersey. Na izany aza, ny sasany fa ny fanoherana ny mety ho fanalefahana.
"Fantatsika fa ny fanatanjahan-tena betting no mitranga raha tsy misy ny fitsipika sy ny vola azo avy aminy no handeha tsy ara-dalàna ny orinasa fa tsy noho ny raharaham-barotra ao New Jersey, toy ny trano filokana ary racetracks. Vao haingana indrindra, New Jersey mpanao lalàna niezaka ny hamela ny fanatanjahan-tena betting tsy mazava mifehy azy (zavatra izay mety ho ara-teknika ara-dalàna eo ambany PASPA); ny tary indray nanenjika mba hampitsahatra ny fanjakana tsy hanao izany, sy ny raharaha dia miasa amin'izao fotoana izao ny lalana amin'ny alalan'ny fitsarana federaly. Lany tamin'ny 1992, PASPA voafetra ny fanatanjahan-tena betting efatra milaza fa efa nanolotra izany ny filokana: Nevada, Delaware, Montana sy Oregon.
(D-NJ) efa nampahafantatra volavolan-dalàna roa izay hanokatra ny varavarana ho an'ny New Jersey fanatanjahan-tena betting, ary angamba hafa firenena, mba mametraka ny fitsipika ao an-toerana raha tsy misy ny fanitsakitsahana ny lalàna federaly schwalbe black jack 26x2.25 hevitra.